U-Anja Schaap ulahlekile sele ebonakalise i-PsyOp? Bona ukuba kutheni (ividiyo) apha: uMartin Vrijland
Ingaba i-Anja Schaap ityala sele libonakaliswe njenge-PsyOp (ukusebenza kwengqondo)? Ngaphakathi nqaku yam yangaphambili Ndivele ndibonise ukuba imeko ye-Anja Schaap ibhekiselele ukuqaliswa kweso sicelo sokusesha esibizwa ngokuthi 'uSherlock'. Ewe, sibona ntoni xa sibona iphepha le-Facebook likaAnja Schaap? Emva koko sibona ukuba idilesi elandelayo idilesi yakhe: I-221B Street Street. Kucinga ukuba oku akusiyo ihlaya elibuhlungu, unxibelelwano kunye nohlelo lwe-Sherlock luya kucaciswa ngokukhawuleza apha.
Ngubani ohlala kwi-221B Street Street eLondon? Kunene, uSherlock Holmes. Ngako oko kukhangeleka ukuba iphrofayli yeAnja Schaap, kubandakanywa inethiwekhi yayo yentlalo (okanye iindawo zayo), iphihliwe ndawonye ngokusebenzisa iiflanzi. Inethiwekhi ye-Inoffizieller Mitarbeiter ingasetyenziselwa ukunika inyaniso kwi-network ye-Facebook. Kwimeko nayiphi na into, kucacile ukuba abantu babonisa ngokucacileyo isiqhagamshelo kunye nenkqubo yeSherlock. Jonga uze ufunde emva koko eli nqaku kulungile ukuqonda indlela ezenziwe ngayo kwaye zisetyenziswe ngayo.
Iminyaka ye-33 iminyaka, ibonisa ukuba sijongene ne-Freemason PsyOp. Inombolo ye-33 imele iqondo eliphezulu ngaphakathi kuluntu oluyimfihlo.
Inani leempendulo kwixesha lika-Anja le-Facebook libonakala lincinci kwaye ngaphezu koko, ezo mpendulo zibonakala zivela kwiiprofayile ezinzulu. Iphrofayili yonke ka-Anja ngokwayo ibonakala ibonakala. Ukongezelela, ixesha lakhe libhekisela ku-Alice kwiWonderland, okubhekiselele kumbindi womgodi wendandatho (iingoma ezilahlekileyo). Kwakhona kubetha ukuba ubonakala nje esebenzayo kwi-2 iminyaka, kwaye ukubetha ngakumbi umdla wakhe kwiichungechunge zeTV ngeSherlock Holmes (cinga nge-Sherlock app).
Siphinde sibone ukubhekisela kuJohn de Mol, endibonise kumanqaku amaninzi ukuba oku kungaba ngumntu omkhulu emva kokuveliswa kwemveliso ("Ngubani uDe Mol?"). Ngaba konke oku ngaphantsi kwesiqhelo "Ukuba sibonisa ngokucacileyo kwaye sihamba nayo, ngoko siyazi ngokuqinisekileyo ukuba sinokuxelela abantu bonke into"?
tags: 221B, Anja, app, Street Street, nzulu, deepfakes, Facebook, eziziimbalasane, Holmes, iprofayili, psyop, Iigusha, USherlock, ekhoyo, ekhoyo
3 Juni 2019 kwi-22: 18
Isicatshulwa esingezantsi sivela eli nqaku (funda lonke ngokuchofoza kwikhonkco):
4 Juni 2019 kwi-12: 48
Ngaba ndibona uhlobo lokukhalela uncedo kwi-Facebook yakho?
Ukunyamalala kwe-Siebe Viegers kwacaca ukuba kukho umntu ohlala kwindawo yakuloo ndawo wayengakaze aphinde abone i-meter-high-Siebe, engenakwenzeka, ukwenzela ukuba ilahleko ihluthe i-100% emoyeni iiyure.
Oku kunokuba luhlobo oluthile lokulahleka, ngokuqinisekileyo ngokuqinisekileyo
Abo bantu abathatha inxaxheba kwiimidiya eziqhelekileyo kunye nabantu abasebenza kwindawo ekufutshane nabo bantu banokungena kulo, banokuthiwa ngabagulayo, abantu abanononophelo kwaye banokuthi baxoxe nabantu ngexeshana ukuhamba kwemali okanye enye inzuzo, ndiyakrokra ukuba ukukhala kwakho ngoncedo kulungile, Mnu Vrijland
Abantu abagulayo abathatha inxaxheba kwizenzo ezinjalo abazenzekanga kwaye abaziqondi ukuba abo bantu bajonga njani kwiindawo zabo kunye namalungu entsapho. (okubi ngaphezu kokuziphatha kakubi)
4 Juni 2019 kwi-12: 59
"Ewe, kodwa uSiebe Viegers ufunyenwe ukuze kungenjalo i-psyop" abantu baya kuthi ngoko
Impendulo: Hayi, yiloo nto abezindaba besithi. Ngaba loo nto mhlawumbi indlela elula ngayo "ngokucokisekileyo" izalise i psyop ewele phantsi kwebhasikidi?
Ewe, mhlawumbi, kuba ukuba bakuphulaphule ifowuni yam (endicinga ukuba ingqiqweni) beyazi ukuba ndineemifanekiso ezininzi (ezifana nokurekhodwa kwengxoxo kwi-pub apho uSebe abekugqibeleni khona).
4 Juni 2019 kwi-13: 06
Owe e ... wafunyanwa efile, kodwa kunzima kakhulu ukufumanisa ukuba yintoni isizathu. Okanye ngaba akazange abekho? Kwaye ngaba ibali lifanele liwele phantsi?
3 Juni 2019 kwi-22: 34
UFleur nguye kuphela othumele amazwana 🙁? : funda
Ibali elibuhlungu kakhulu
4 Juni 2019 kwi-17: 28
Ufika njani kwiphepha le facebook le-sheep ye-anja?
Andikwazi ukumfumana, ndiyifakile ikhonkco.
Ukuba kuyinyani into ehlekisayo.
4 Juni 2019 kwi-17: 43
4 Juni 2019 kwi-18: 29
Fumana i-psyop lebulable ???
4 Juni 2019 kwi-21: 01
Ndiyathetha ukuba yinto ekhethekileyo ukuba kubonakala ngathi badibanisa ngamabomu noSherlock Holmes kwiprofayili ye facebook, ngokungathi bayayenza.
Oko kunjalo akunjalo ukuhleka, kunokukhala.
Kodwa ndacinga ukuba kwakucacile.
5 Juni 2019 kwi-08: 59
Kulungile, ekuqaleni ndandicinga ukuba ungezantsi kwi psyop.
Iingcamango kule miba zihlaziyiweyo izenzo zeGladio. Ziyinto efihlakeleyo, intle, i-subliminal.
Ewe, abafana abasuka kwisikripthi bayazi ukwenza oko. Basebenza rhoqo ekulawuleni yonke into ngokwezifiso zabo.
4 Juni 2019 kwi-22: 06
Akukho Bhengile kuMasipala waseKatwijk (ikhaya kunye nokuzalwa kwa-Anja). Kucacile i psyop.
5 Juni 2019 kwi-04: 55
Awuzange ukhankanye igama likaMvu. Ininzi yezimvu ivumela ukuba iqhutywe kwaye iyatshiswe yi-sheepdogs (imidiya) ukuze kubonakale ukuba iinkokheli zelizwe lethu zithetha okusemandleni ethu.
11 Juni 2019 kwi-09: 36
Ukulindelekile ukuba unyanene, iWest West sele isetyenzisile i-Face Morphing, ingxube kunye nenkrini,
Ubungqina bokuqinisekisa ubungqina buka-Anja Schaap buye lwaqhutywa kuphela ngumntu oza kuhlala phantsi kwehostela lika-Anja kwi-Wega 15. eKamwijk, eboniswe kwifilimu yexesha leTV West, ubone ifilimu yeWest West kwikhonkco
Nangona kunjalo, xa sitshekisha ebusweni bomntu, sele sibona ukuphazamiseka okungaqhelekanga.
Ngenxa yomthetho we-AVG, akunakwenzeka ukubeka isithombe kule ndawo apho kungaboniswa khona ukuba kukho ukuphambuka. Nangona benza okusemandleni abo, benza iimpazamo ezinzulu, kodwa ngokuqinisekileyo kufuneka usondeza ebusweni, akukho mntu uthatha ixesha kodwa ucinge ukuba
Ngaphantsi kwezilishumi ezifunyenweyo: umzuzu we-01 umzuzu -25 sec. 00 kwi-01 min-51 sec. I-18 kukho ngaphezulu kodwa ezi zinto zibaluleke kakhulu.
I-1- Iindlebe zendoda zibambelele ebusweni ngokumangalisayo
I-2- Ubume beendlebe zingathethwa kodwa zingabizwa ngokuba yi-nature
I-3- Umbala weenwele, intloko evela kumnyama omnyama ukuya kwi-gray kunye ne-Goatee Red? (kunokwenzeka, kodwa kunjalo?)
I-4- I-01-28.2 I-Blur enkulu kakhulu emgqeni womhlathi? Kungenxa yokuba umntu uphendulela intloko yakhe ngakwesobunxele, ewe oko kunokwenzeka, kodwa i-blur (umfanekiso ophazamisekileyo) ukhona nalapho intloko igcinwa.
I-5- Inkohlakalo enkulu ikhona malunga ne-jawline kunye nomphunga kodwa ibhattshi elimnyama likhangela
umfanekiso onobunzima, unokwazi ukuwubona kakuhle.
6- Hamba kwi-1-37.07 yesibini ukuya kwi-1-37.19, Ukuvula umlomo ubonakala njengebhobhothi
umhlathi osezantsi uhamba kodwa ubuso bonke buhlala bukhuni, obunemvelo.
7- Ngomzuzu 1-45.17 amehlo avulekileyo ngokupheleleyo, ngoko kukhanya okukhulu kuya kuvela kwiinkophelo, kodwa kuluhlaza kunye nokukhanya okumnyama, kwakhona
I-8-01-46.19t / m 01-47.12 Nantsi into ehlekisayo, iingxowa ezibonisa zonke imibimbi ngakwesokunene sakhe kwaye kungekho ngakwesobunxele sayo isohlo, konke okubonakalayo kunkulu kakhulu, imibimbi
zigqwetha kakhulu, iilishi ezingenakubonwa okwesibini. Kukho umva emva kweentlanzi kodwa izihlunu azikho, i-eyelashes ayisabonakali njalo njl ... njl ...
I-9- Ibala elimdakala elimdaka ngaphaya kwamacangca omlomo, vumela ukuba bahambe rhoqo ngoku
ukuhamba ngokubonisa ubukhali kunye nobunzulu bomlomo wakhe, kubonakala kungenasemvelo.
I-10- Minute 01-38.07 ukuya kwi-01-42.22 Gcina iliso kwibhokisi le-checkered ngokubhekiselele entanyeni yalo ejikelezayo rhoqo, isitya esikhwiweyo (ihood) ishukumisa inqaku kunye kwakhona lihlala libukhali kuyo yonke indawo ikhamera isashukunyiswa ngokukrakra, kunokuba ithambile ikhamera yam.
I-11- Kanye nje ngombukeli omhle: awuboni udonga olwesobunxele kunye nayiphi na imvelaphi ehambahambayo ngokubhekiselele ngaphambili, oku kufuneka ukuba kuba le khamera iyahlala igxeka.
kwaye ubone ezinye iindlela
12 Juni 2019 kwi-13: 06
Imithetho ye-AVG ayikwenzelwa ngokwenene ummi, onokucaca ngoku ngoku.
Ngokuqinisekileyo uyaphambuka ukuthetha ukuba iMedia (= amandla ajikelezayo) unokukwazi ukunqumla abantu kubantu abaninzi, kodwa abantu abanako ukusebenzisa iindlela zabo kumntu othile, abantu banokukubonisa oko. Ukugqitywa kwegama elipheleleyo kunye nokuqhubeka nokukhankanya nokukholelwa ukuba siphila kwilizwe lentando yenkululeko. Ngeendlela zabo banikezela ubungqina obucacileyo bokuthi siphila kwintlanzi, kodwa asikwazi ukubonisa ukuba oko kuhlawulwa kwakhona
13 Juni 2019 kwi-15: 55
Ndiyavuma! Jonga ukuba ukuthintela 'abasebenzi basekuhlaleni' bezonxibelelwano kungekudala kudibaniswe nomthetho wobumfihlo. Urhulumente usebenzisa ubuqili, iMacavellian yokuqiqa. Uvele ugijime lonke i-180 °
"Ukunceda ukuxhatshazwa ngokufayilila kunye nokwabelana kwimidiya yoluntu: isijeziso esinzima!
kunye nefayili olwaphule ubumfihlo bexhoba. "Ukushicilela izinto ezinjalo kwimidiya yoluntu kufuneka kuhlwaywe kakhulu. Kungenxa yintoni malunga nomthetho wobumfihlo, ungathethi ukuba yiyiphi ividiyo eyenziwa kwintsapho kunye nabahlobo. "
Uhlobo olunjalo luya kuhamba ngendlela yaso kwaye luncede umntu ozayo ngaphandle kobungqina bobuqhetseba. Umkhonzi cq. I-Psychopath idinga ukukhuselwa ngamaxesha onke, inzondelelo yomsebenzi onjalo we-lackey iyancipha kwaye ingeniso iphezulu. Ngaphambi kokuba i-UAV / i-robot elawulwa yi-AI isebenze, eli thuba kufuneka lisetyenziswe ngokusemthethweni ukuvala yonke into, ngokuqinisekileyo ekupheleni kombuso 😀
« I-Thijs H. PsyOp kwafuneka yonakalise ukufihla kwezobugcisa kwaye sele sele iphumelele namhlanje
UJos B. (Nicky Verstappen) I-PsyOp ngoku isetyenziselwe ukufuna iingxelo zabaxhasi kummeli? »
Iindwendwe ezipheleleyo: 13.746.988
UWilfred Bakker op Inyathelo lokuqala kukulebhelisha, inyathelo lesibini kukhutshelwa ngaphandle: iqhosha lokugonya
SalmonInClick op Inyathelo lokuqala kukulebhelisha, inyathelo lesibini kukhutshelwa ngaphandle: iqhosha lokugonya
Ilanga op Inyathelo lokuqala kukulebhelisha, inyathelo lesibini kukhutshelwa ngaphandle: iqhosha lokugonya
UMartin Vrijland op Inyathelo lokuqala kukulebhelisha, inyathelo lesibini kukhutshelwa ngaphandle: iqhosha lokugonya
"Inyani njengoko siyibona"
Le ncwadi sisishwankathelo sesona sinyani sobuxoki kunye neQokelela yeTruman edityanisiweyo apho uluntu lubanjelwe khona ngokwehlelo ukusuka kubom besiya engcwabeni. Incwadi ibonelela ngesiqiniseko esineenkcukacha, kodwa ngaphezulu kwayo konke kuya nesisombululo esicacileyo.
Ixabiso le-€ 24,95